Faransiiska oo Giriigga siinaya dayuurado casri ah xilli ay Turkiga is hayaan (Dalal Muslim ah oo la safan) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Faransiiska oo Giriigga siinaya dayuurado casri ah xilli ay Turkiga is hayaan...
Faransiiska oo Giriigga siinaya dayuurado casri ah xilli ay Turkiga is hayaan (Dalal Muslim ah oo la safan)
(Athens) 16 Dis 2020 – Giriigga ayaa sheegay in 18 dayuuradood oo ah nooca Faransiis-sameega ah ee Rafale ay soo gaarayaan sanadka soo aaddan, taasoo qayb ka ah qorshe lagu casriyaynayo 3-da laamood ee ciidamadooda, xilli ay xiisadi kala dhaxayso Turkiga.
RW Kyriakos Mitsotakis ayaa sheegay in heshiisku uu gebagebo marayo iyadoo ay ka wada shaqaynayaan Dowladda Faransiiska iyo qandaraaslaha Dassault Aviation, isagoo arrintan uga dhawaaqay baarlamanka oo miisaaniyadda u codeeynaya 2021.
Waxaa qorshahan ku baxaysa 11.5 bilyan oo euro ($14.5 bilyan oo doollar).
Giriigga oo Turkiga NATO kula jira ayay isku hayaan xuduud badeedyo iyo gaas ku jira Bariga Badda Cad oo ay Turkigu yihiin dalka ugu xeeb dheer, iyadoo ay xiisaddu sii xumaatay sanadkan lagana baqayo inay gaarto gacan ka hadal ciidan.
Qorshaha lagu casriyaynayo millateriga Giriigga oo 5 sano loo qorsheeyey ayaa waxaa qayb ka ah dhamaanba 3-da laamood ee ciidamada dhulka, cirka iyo badda oo 15,000 oo askari oo cusub lagu soo darayo.
Waxaa barnaamijka ka mid ah iibsiga maraakiib cusub, daroonnada iyo helakabtarrada gujisyada dila, in la casriyeeyo dhamaanba raxanta F-16 taasoo ay 2027 qabanayso shirkadda Maraykanka ah ee Lockheed Martin.
Giriigga ayaa sidoo kale isbahaysi hor leh la wada dalalkii horay ugu dhowaa sida Faransiiska, Israel iyo Maraykanka iyo kuwo cusub sida Masar iyo Imaaraadka.
Previous article”Hargaysa nama siin karto suuq u dhigma Muqdisho oo ah midka noogu wayn!” – Jaadlayda Kenya oo furka ku xooray dowladooda
Next articleKenya oo sheegtay xilliga ay bilaabmayaan duullimaadyada tooska ah ee Somaliland & caqabad hor taalla (Fursad laga hor istaagey shacabka Muqdisho)